Kuphela yi-3% yamandla kwii-Balearic Islands ezinokuphinda zenziwe | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Kuphela yi-3% yamandla kwii-Balearic Islands ezinokuphinda zenziwe
UTomàs Bigordà | | I-ecology, Umoya ovuselelekayo
Imifuno / iEuropean Alliance Alliance (Imifuno / iAle) kunye neMÉS ngeMallorca bonisa ukungcola okunzulu kuba kwii-Balearic Islands "zipesenti ezi-3" zamandla ziyavuseleleka, xa oko kusekwe yimigaqo yaseYurophu kukufikelela kwiipesenti ezingama-20 ngo-2020.
Oku kuthethwe yi-Green / ALE MEP, u-Florent Marcellesi, kwinkomfa yoonondaba ePalma nalapho, kunye nosomlomo we-MÉS eMallorca (Balearic Islands), uDavid Abril, wazisa i-ajenda yezinto eziphambili zokudlulisa iinjongo ukuya eYurophu «ukufezekisa iiBalearic Islands«.
UMarcellesi uvakalise ukuzibophelela kwakhe ekudluliseleni amaphulo e-MÉS eBrussels kwaye ucacisile ezi zindululo zijolise “ekuphumezeni Utshintsho kwezoqoqosho nakwezendalo kwiiBalearic Islands«. Njengaleyo sele iqalile kwi Iziqithi zeCanary.
Ngale ndlela, ucacisile ukuba iiParadise zaseParis zibangele ukuba "impembelelo ephezulu" nokuba “endaweni yokusetyenziswa koqoqosho olunye, usinge kuqoqosho olujikelezayoUkusetyenziswa kwakhona kwemithombo yobutyebi ”.
«UMALLORCA UNGANAKHO KANYE KUFUNEKA UBE YINKOKELI» Uluvo lwakhe oluphambili kukuba umntu akanyanzelekanga ukuba «athethe ngeziqithi ezisekwe kuhambo olunye lokhenketho, kodwa ukubanakho ukwahluka koqoqosho kunye nokukhuthaza ukusetyenziswa kwemveliso yangaphakathi ».
Ke, wathi "kufuneka sibheje kumandla ahlaziyekayo nacocekileyo kwaye vala ezo zivelisa amandla amdaka»Kwaye ibonakalisile ukuba, ngokweZivumelwano zeParis, isityalo i-Es Muntanar kuya kufuneka senziwe valwa phambi kwe-2025
Ummeli weGreen / ALE naye uphawule imeko ethile yesikhululo seenqwelomoya iVienna, apho ulwandiso olucetywayo lungakhange lwenziwe ngokungqinelana nokunyuka okubonakalayo kwi-Co2. "Sizokwakhela kula mava afana nala angaqwalaselwa kwisikhululo seenqwelomoya sasePalma, utshilo. Ukongeza, i-MEP ikwaphakamisile ukubakho kokufuna 'Irhafu kwiinqwelomoya ezijolise ekunciphiseni ifuthe ngokuzinza ”.
Amandla ahlaziyekayo kwiiCanary Islands
UMphathiswa wezoQoqosho, iMizi-mveliso, uRhwebo noLwazi, uPedro Ortega, uxele ukuba uRhulumente ulindele ukuba "ngesabelo esitsha, ngexeshana elincinci singasuka kwi-9% ivuseleleke iye kwi-21%." KwiiCanary Islands kukho iifama zomoya ezili-18, kwaye kungekudala eli nani liza kunyuka liye kuma-67. Iifama zomoya ezingamashumi amane anesithoba ziya kongezwa kwezo sele zikho kwiArchelago balinde urhulumente ukuba ababele isabelo esitsha samandla.
Ukuphuculwa kweefama zomoya zangoku kwiiCanary Islands ngesixhobo esinamandla ngakumbi, Ukusebenza ngokufanelekileyo nangobunkunkqele kubalulekile ukuze kufikelelwe kwimveliso yamandla amakhulu kwiiIqithi, ngakumbi kwimeko yabo bahlohliweyo kwiindawo ezibonisa iimeko ezingcono kwiArchipelago kwaye esele beneminyaka ethile.
UMphathiswa wezoQoqosho, iMizi-mveliso, uRhwebo kunye noLwazi loRhulumente weZiqithi zeCanary, UPedro OrtegaUkhumbule ukuba iifama zomoya ezingama-49 ezafumana ngoDisemba 2015 isabelo somvuzo othile esiza kuveliswa kwiiCanary Islands, zongeze kumandla e-436,3 MW. Kubo sele bekho ezintandathu esele ziqalisiwe okwethutyana kunye nezinye iipaki ezingama-28 ezinikwe ugunyaziso lolawulo, ezisixhenxe zakhiwa eGran Canaria kwaye enye iseTenerife.
Umcebisi uqinisekise ukuba, “ukongeza kwiandise amandla okuvelisa umbaneUkuphuculwa kwamaziko kuya kwenza ukuba kuncitshiswe imbonakalo yomhlaba kunye nokusingqongileyo ”kwaye kubhekiswa kwimfuno yokusekwa kwesakhelo solawulo esenza ukuba kuxhotyiswe kwakhona.
Ngokubhekisele kwimiceli mngeni yangoku kumandla ahlaziyekayo, uPedro Ortega uqaqambise ukuvunywa kwe isabelo esitsha somvuzo womoya kunye neepaki ze-photovoltaic kwiiCanary Islands, athe uRhulumente wathembisa ukuyisusa kwiinyanga ezine zokuqala zika-2017 kunye nokukhuthaza amaziko amatsha e-geothermal asezantsi, apho iqela elisebenzayo lenzelwe zonke iiarhente ezichaphazelekayo.
NgoSeptemba, iGazethi yaseburhulumenteni yeZiqithi zeCanary yapapasha ukuvunywa kokugqibela kweziseko zolawulo ze iinkxaso zoncedo lwezixhobo zokuzisebenzisa eLanzarote naseLa Graciosa ngenkqubo yamandla ahlaziyekayo kwizakhiwo ezixhunyiwe kwaye zingaxhunyiwe kwinethiwekhi yokuhambisa.
Umcebisi uthe uRhulumente ulindele ukuba «Ngesabelo esitsha, ngexeshana elincinci sinokusuka kwi-9% ivuseleleke ngo-2015 iye kuma-21%. Sibala ukuba kwi-2025 i-Canary Islands inokungena nge-45% ».
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Kuphela yi-3% yamandla kwii-Balearic Islands ezinokuphinda zenziwe
Amandla enyukliya yeyona nto ityholwayo kwezobuchwephesha nakwinzululwazi
ISilicon Valley, yamandla omoya aselunxwemeni ngamazwe amathathu aseYurophu